အယ်လ်ဂျီးရီးယား - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုအပြီးပိတ်ထားသော M6 ရုပ်သံလိုင်း
By ချစ်ချစ် On စက်တင်ဘာ 30, 2020
အယ်ဂျီးရီးယားဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ထိုနိုင်ငံရှိလူကြိုက်များဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှု Hirak အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်အယ်လ်ဂျီးရီးယားတွင်ပုဂ္ဂလိကပြင်သစ်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း M6 အားလုပ်ကိုင်ရန်ခွင့်မပြုတော့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
တနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့သောကြေညာချက်တွင်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနကဤမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုစွပ်စွဲခဲ့သည် အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ပုန်ကန်မှုအားလုံး၏နိုင်ငံ - ၏ "ဟီရာကိုဘက်လိုက်ကြည့်ပါ" တပ်ဆင်ထားသောအဖွဲ့မှထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည် "မှားယွင်းသောပစ်ခတ်မှုခွင့်ပြုချက်".
"ဒီထုံးတမ်းဓလေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုအယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ရန် M6 အားခွင့်မပြုတော့ရန်ဆုံးဖြတ်သည်"ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားသည်။
ပြပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အထူးသဖြင့် "သီးသန့်စုံစမ်းရေး"ဤ ၇၅ မိနစ်ကြာသောအစီရင်ခံစာသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည် "သတိပညာရှိသောကင်မရာများ" - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးမကြုံစဖူးအုံကြွမှု၏ချုပ်နှောင်မှုအောက်တွင်သူတို့၏တိုင်းပြည်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အယ်လ်ဂျီးရီးယားလူငယ်သုံး ဦး ၏သက်သေခံချက်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကြောင့်စျေးကွက်ရပ်ဆိုင်းသွားသည် "ဟီရာက" မတ်လလယ်တွင်။ ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည် "အရသာမရှိသောသက်သေခံချက်များ"၏ "အများဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ရေးcliché" et "နက်ရှိုင်းခြင်းမရှိဘဲသို့ရာတွင်စုစုပေါင်း".
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောအယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှလူသိများသော YouTuber ဖြစ်သော Noor သည်တနင်္လာနေ့တွင်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ "ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း" ပြင်သစ်ရုပ်သံလိုင်း၏။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ "ပြင်သစ် - အယ်လ်ဂျီးရီးယားစာနယ်ဇင်းသမားတစ် ဦး သည်အယ်လ်ဂျီးရီးယား fixer ၏အကူအညီဖြင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေရန်ရိုက်ကူးရန်မှားယွင်းစွာခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့သည်"တစ် ဦး ပြစ်မှု "ထို့အပြင်ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေး" ။
၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်သတင်းထောက်များကိုတရားဥပဒေအရအရေးယူရန်ကတိပေးခဲ့သည် "စစ်မှန်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအရေးအသားအတွက်အတု"။ က အယ်လ်ဂျီးရီးယားနှင့်သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းများအကြားတည်ရှိနေသောမယိမ်းယိုင်သည့်ယုံကြည်မှုကိုဖြိုခွင်းရန်နှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားလူမျိုးများနှင့်သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းများအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များနှင့်ကူညီပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောအစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်ဤမီဒီယာများသည်တိုက်ဆိုင်မှုမရှိသည်မှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိပါ။, သူယုံကြည်သည်။
၀ န်ကြီးဌာန၏အဆိုအရ M6 သည် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၆ ရက်တွင်ပြပွဲရှိအဖွဲ့ ၀ င်များအတွက်စာနယ်ဇင်းအသိအမှတ်ပြုတောင်းဆိုခြင်းကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ "သီးသန့်စုံစမ်းရေး"အပေါ်တစ် ဦး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဘို့ Oran မြို့၏စီးပွားရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းအားမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်.
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများမှဆိုးဝါးသောတုန့်ပြန်မှုရရှိခဲ့သည့်တောင်းဆိုချက်ကိုသူကပြောသည်။ ပြင်သစ် ၅ ပြည်သူ့ရုပ်သံလိုင်းကအယ်လ်ဂျီးရီးယားလူငယ်များနှင့်အခြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ကားအားထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် "ဟီရာက" -
"အယ်ဂျီးရီးယားအချစ်" ပြင်သစ်စာနယ်ဇင်းသမားနှင့်အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှဒါရိုက်တာ Mustapha Kessous ကအယ်လ်ဂျီးယားနှင့်ပဲရစ်တို့အကြားသံတမန်ရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://onvoitout.com/ တွင်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်။
Ep 75 ။ မျက်နှာဖုံးများ၊ Heavy Metal Football နှင့် Johnny Depp တို့၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောရတနာ - ဗီဒီယို